FAHASALAMANA : Mety hitarika homamiadana maro ny aretina « Sinusite » raha tsy voatsabo
Areti-mandoza ny “sinusite”, hoy Maître Johnny Maminiaina mpitsabo amin’ny fomba ara-boajanahary eny Mahitsy Tanàna, Antananarivo. 28 février 2022
Am-polo taona no efa nitsaboany io aretina io, fahaizana nolovana tamin’ny ray aman-dreny sy nombàm-pikarohana, ka afaka mametraka antoka amin’ny fanasitranana izany. Ankoatra ny aretin’andoha sy ny fofo-maimbo aterany, mety hitarika homamiadana maro ny mikraoba avy aminy raha midina any amin’ny taovam-pisefoana sy fandevonan-kanina.
Misy amin’ny olon-drehetra io aretina io saingy ny heriny sy ny fisehony no samihafa, hoy izy. Ahiana hitarika fahasemporana sy tsy fahatsiarovan-tena ao anatin’ny fihetsehany ny aretina sinusite, araka ny fanazavana. Ny andro mangatsiaka sy ny vaninandro ririnina no ihetsehan’ny aretina amin’ny tsirairay, efa mari-drefy ambony kosa no mahazo ilay olona mitondra azy raha mihetsika amin’ny andro mafana. “Azo sitranina tsara ary tsy ilàna fandidiana ny aretina sinusite, hoy Maître Johnny Maminiaina, ka dimy hatramin’ny folo minitra ihany no ilana hanaisorana azy tanteraka amin’ny olona iray, tsy maharary ary tsy misy rà ny fitsaboana ataony”.
Isan’ny liana amin’ny famokarana fanafody ary nitady fiaraha-miasa tamin’ity mpitsabo ity ireo vahiny rehefa avy nanao fanandramana sy fitiliana ny fanafody vokariny. Tazana tamin’izany fa tsy misy voka-dratsy "effet secondaire" amin’ny olona tsaboina ny fanafody. Fanafody vita amin’ny zavamaniry sy akora natoraly avokoa no entiny mitsabo ireo tonga manatona azy ary ny tenany ihany no manodina sy manafangaro izany. Mametraka antoka amin’ny fahasitranana amin’ny aretina tsaboiny i Maître Johnny, ary mitsabo ireo aretina saro-panafana toy ny homamiadana isan-karazany sy ny aretin’ny taova ary ny vokatry ny mosavy, tsy misy fanompoana ratsy kosa entin’ny fitsaboana ataony, araka ny fanazavana.